स्वास्थय क्षेत्रमा लैडि्क समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकारण कार्यक्रम सम्पन्न - radiosatellite
परासी १७ मंसिर ,
नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूले महिला अधिकारको रक्षा, सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि विभिन्न तवरले काम गर्दै आएका छन् । तर कुनै पनि मुलुकले पूर्ण समानता हासिल गर्नसकेका छैनन् । हरेक मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समय–समयमा मानव विकासका विभिन्न आयामसँग जोडिएका क्षेत्रमा लैंगिक समानताको अवस्था कस्तो छ ? पूर्ण समानताको लक्ष्यमा पुग्न कति बाँकी छ ? त्यस बीचको अन्तराल कति छ ? त्यसलाई हटाउन कसरी अगाडि बढ्ने भनी कार्ययोजना बनाई काम गरेमा लैंगिक समानताको लक्ष्य छिटो प्राप्त हुनसक्छ ।
यसै बिषयमा स्वास्थय क्षेत्रमा लैडि्क समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकारण कार्यक्रम आज परासीमा सम्पन्न भएकाे छ ।रामग्राम नगरपालिकाकाे आयाेजना र यूएसआईडि ,स्वास्थयकाे लागि सक्षम प्रणालीकाे सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे ।समाजका सबै वर्गका महिला तथा बालबालिका र पुरूषहरूले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्न र स्वास्थ सेवा लिन समान पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहकाे लागि कार्यक्रमकाे आयाेजना गरिएकाे स्वास्थयकाे लागि सक्षम प्रणाली संस्थाका स्वास्थ्य समताका फाेर्कल प्रसन निलम धनुशेले जानकारी दिईन । समानता शक्ति , समाजमा लैङ्गिक समानता कसरी र लैङ्गिक मुलप्रवाहिकारण कसरी गर्न सक्छौं भन्ने बिषयमा सहजिकारण गरिएकाे तुलाधरले बताईन ।उनकाे अनुसार अन्तरबिबिधाता ,प्रवाहमाकाे बिषयमा र सिमाकृन्त महिला,पुरूषहरूलाई मुलप्रवाहमा कसरी ल्याउन सकिन्छ बिषयबारे सहजिकारण गरिएकाे बताईन।मुलप्रवाहिकारण स्वास्थय क्षेत्रमा प्रणालीमा काम , लैङ्गिक मुलप्रवाहिकारण , लैङ्गिक समानता र सामाजिक समानता नहुदाँसम्म हामिले चाहे जस्तो स्वास्थ्य सेवा पुराउन नसकिने फाेर्कल प्रसन निलम धनुसेले बताईन।माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिता छात्रसरह हुनथालेको छ । उच्च शिक्षामा पनि महिलाहरूको नतिजा पुरुषको भन्दा अब्बल आउन थालेको छ । सुत्केरी हुँदा दक्ष प्रसूतिकर्ताको प्रयोग दर बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । मातृमृत्यु दर घटेर प्रति १ लाख जन्मदरमा २३९ मा झरेको छ । निजामती सेवामा महिला सहभागिता उत्साहजनक रूपले बढेको छ । हाल महिला उपसचिव र सहसचिव पदमा महिलाको दह्रो उपस्थिति रहेको छ, जो भविष्यका सचिवका दाबेदार हुन् । इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कम्प्युटर विज्ञान, पत्रकारिता, खेलकुद, कला तथा संगीतजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ । न्यायिक क्षेत्रमा वकिलदेखि न्यायाधीशसम्मको पदमा महिला सहभागिताको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध ठूलो जागरण आएको छ । महिलामा आत्मविश्वास बढ्दैछ ।
उपरोक्त उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि राज्यका कार्यकारी निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको उपस्थिति कमजोर छ । दलका पदाधिकारीमा, मन्त्रीपरिषद्मा, कर्मचारी संयन्त्रको उच्च तहमा महिला सहभागिताको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा कुनैको पनि प्रमुख पद र कर्मचारीतन्त्रको मुख्य सचिवमा भने अझै पुरुषहरूकै बर्चस्व छ । स्थानीय सरकारमा पनि महिलाहरू प्रमुख पदमा नगण्यमात्र प्रतिनिधित्व गराइएका छन् । कार्यकारी भूमिकामा महिलाको उपस्थितिलाई दलहरू, सबै सामाजिक संरचनाहरू र राज्य प्रणाली पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेका पुरुष तथा महिलाहरूले स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ ।
महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, हत्या, आत्महत्या, कुटपिट, महिला बेचबिखन, तिलक, दाइजो, बोक्सी र छाउपडी प्रथा र श्रम शोषणले लैंगिक समानताका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । घरेलु काम, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा महिला संलग्नता बढ्नु र घरेलु कामको जिम्मेवारीमा पुरुषहरूले हिस्सा नलिनुले महिलाहरूको कार्यबोझ बढेको छ । समान श्रमको समान ज्याला पूर्णरूपमा कायम भएको छैन ।
यी समस्याहरू समाधान नगरी हामीले सोचेको पूर्ण लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ आउने दिनमा लैंगिक समानताका अन्तराल हटाउन अझै प्रभावकारी, प्रस्ट र सशक्त नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप गरिनुपर्छ । तब मात्र लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्कको अंक १ प्राप्त गर्ने गति तीव्र हुनसक्छ ।उक्त कार्यक्रम रामग्राम नगरपालिका नगरप्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले स्वास्थ्यसेवा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिदाँ नगरिकलाई कुनै पनि भेदभाव नगरिकन सेवा दिनुर्पर्नेमा जाेड दिएका थिए ।उनले स्वास्थ्यकर्मीले नगरिकलाई स्वास्थ्यसेवा दिदाँ समानताकाे मुलप्रवाहिकारण अनुसार सहज सेवामा ध्यानदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अग्रह गरेका थिए ।रामग्राम नगरपालिकाका शाखा प्रमुखहरू ,कार्यपालिका सदस्यहरू स्वास्थ्य ईन्चार्जहरूकाे गरि ५० जनाकाे सहभागीता रहेकाे प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत रूद्र प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामनरेश राय,हेल्थ असिस्टेन्ट सुरज हरिजन लगायतले आफानाे धारण राखेका थिए ।